I-META CAPITAL - Kopisha Amarobhothi Okuhweba - Brokers Equiti & Binance
Amarobhothi okuhweba ▼
Ukuhweba irobhothi elizinikezele emakethe yegolide (xauusd).
Irobhothi lokuhweba elinikezelwe emakethe ye-cryptocurrency.
Irobhothi lokuhweba elinikezelwe emakethe kawoyela.
Ukuhweba irobhothi elizinikele emakethe ye-Forex.
Amarobhothi okuhweba asekelwe ezintweni.
Ukutshalwa kwezimali ▼
Faka imali ku-Big Data cryptocurrency.
Faka imali kugolide namadayimane ngama-crytos akho.
Faka imali ku-real estate nge-Ethereum blockchain.
Thenga, ugcine futhi uvikele ama-cryptocurrensets angaphezu kwama-250
Tutorial Izifundo zevidiyo, kusuka ku-blockchain kuya kuma-cryptocurrensets
Ulwazi olubalulekile mayelana ne-idijithali yemali ngayinye
iwebhusayithi Official PantheraTrade
Uhlelo lwe-ATG (Gold)
Ngena ngemvume ku-MetaCapital
Multi Trading Bots
I-ecosystem yamarobhothi okuhweba ahamba phambili ku-Forex, i-Crypto kanye ne-Commodities.
I-Meta Capital yiphakheji ehlanganisa amaningana amarobhothi okuhweba izindlela ezizenzakalelayo zokukhiqiza izinzuzo ezimakethe zezimali eziningi. Kumarobhothi e-Forex kanye Nezimpahla, lezi zizoxhunyaniswa ne broker I-Equiti (umthengisi olawulwayo). Izinkokhelo zingenziwa nge-crypto kodwa futhi ngamadola noma ama-euro, ngekhadi lasebhange noma ngokudluliswa kwebhange.
I-MyFxBook Isifundo se-PDF
Ama-akhawunti we-PAMM aphethwe amaklayenti axhunywe ku-akhawunti enkulu yomphathi futhi konke okwenziwe umphathi kuboniswa ngokulingana kuma-akhawunti amaklayenti.
Ibhalansi ye-akhawunti ye-PAMM Master imele inani eliphelele lediphozithi yawo wonke amaklayenti. Ukuqinisekisa ukuphepha kwabatshalizimali, amadiphozithi amaklayenti agcinwa kuma-akhawunti abo okuhweba, umphathi akakwazi ukufinyelela kulawa ma-akhawunti ukwenza imali ikhishwe.
Ukukhetha a broker kulawulwa
Qala ukuhweba ngamarobhothi e-MetaCapital
Izinzuzo ezilinganiselwe ngokuya ngonya lwerobhothi elikhethiwe.
Ukunciphisa kubonisa igebe elikhona phakathi kwengaphezulu lephothifoliyo yakho nezinga lakhona lamanje.
I-PIP inkomba yokuhluka kwentengo esikhathini esithile.
Ake siqale ukubhaliswa kwamarobhothi
Nge-Equiti, ungasebenzisa amarobhothi okuhweba angcono kakhulu ku-ecosystem ye-MetaCapital. I-Equiti a broker kulawulwa kusetshenziswa izinkokhelo ngekhadi lesikweletu, ukudluliswa kwe-SEPA noma ukudluliswa kwezimali ze-crypto (BTC, ETH kanye USDT).
Isinyathelo 1 / MetaCapital
Ukubhalisa ku I-MetaCapital
I-MetaCapital yinkampani yokuhweba esanda kwakhiwa ezinze eMontpellier (France).
Gcwalisa izinkambu ezingezansi:
Izwe Ohlala kulo
Isinyathelo 2 / Equiti
Ukubhaliswa ku- broker E-Equiti
Kufanele usebenzise i- i-imeyili efanayo kunaleyo esetshenziselwa ukubhalisa I-MetaCapital.
Bhalisa e-Equiti Xhuma ku-Equiti
Ake siqale ngokugcwalisa uhlobo lwe-akhawunti olufunayo, okungukuthi i-akhawunti yomuntu siqu noma yebhizinisi. Okuwinile kuzodluliswa ngemali ye-fiat njengama-euro noma amadola. Amakhomishana okudluliselwa azothunyelwa ekuqaleni kwenyanga nge-crypto USDT I-ERC-20.
Isihloko: Mr, Mrs, Miss
Thumela ikheli le-imeyili
Ucingo kuye ngezwe. (+33) yase-France.
Ezinye izinyathelo zizokwaziswa ngenguqulo ye-PDF kusayithi le-MetaCapital uma ubhalisiwe futhi uxhumekile.
Ukubhaliswa ngakunye kwenziwa ngesixhumanisi sokudlulisa!
Futhi ngikholwe, akusabuhlungu!
Akulula ukuqala lolu hlobo lwe-adventure uma ungenakho ulwazi lwangaphambilini lokuhweba noma lwe-cryptocurrency. Kungakho ngizivumela ukuthi ngikuphelezele, ukuze ngikusize umise ama-akhawunti akho phakathi kwakho broker (broker) kanye ne ukuhweba irobhothi, phendula imibuzo efanele futhi unikeze ukusekela kobuchwepheshe. Uma ungasitholi isixhumanisi senxusa kwamanye amarobhothi, yingoba angifuni ukuyisho: noma ngiyayihlola, noma ngiyasola. Ukwengeza, kufanele ukwazi ukuphatha ukwesekwa kobuchwepheshe futhi uhambisane nokuthunyelwa kwakho ngendlela efanele, ukuze ngingabi sengozini yokukunikeza izixhumanisi zokudlulisela ngaphandle kokuvinjelwa.
🥇 Izinhloko zemali. ± $ 250
🥇 Amaminithi. ± 1300$
Broker I-Equiti ilawulwa
imali encane. ± €50
imali encane. ±$10
Ngabe kukhona ulwazi olulahlekile?
Unganqikazi ukungithinta ku-💬 Telegram ukuze ngikweluleke futhi ngikunikeze usizo lwami.
Qaphela imikhonyovu ye-forex kuwebhu
Thola uhlu lokuvinjelwa lwezinkampani ezingagunyaziwe namasayithi akhishwe yi-AMF. Awekho amarobhothi ethu noma brokerakufakiwe.
Ukusebenza kwangaphambilini akusona isiqinisekiso sokusebenza kwesikhathi esizayo.
Akukho ukusebenza okuphezulu ngaphandle kwengozi enkulu. Emakethe yamasheya, ukusebenza okwedlule akusho ukuthi kuyaziphinda.
Asikho iseluleko sokutshala izimali kuleli sayithi
Ukuhweba kukuchaya ezingozini zokulahlekelwa okulingana namadiphozithi futhi kufanele kuphela kumakhasimende anolwazi lwanele anamandla okubhekana nale ngozi. Imiphumela edlule ayikhombisi imiphumela yesikhathi esizayo. Isivakashi sinesibopho kuphela sokusetshenziswa kolwazi olutholiwe futhi sithatha zonke izingozi ezihlobene nalokhu kusetshenziswa. Ikakhulukazi, kukusivakashi ukuthi athathe zonke izinyathelo ezidingekayo ukuze alondoloze ubuqotho benhloko-dolobha yakhe. Robots-trading.fr, i-cryptonithe.com noma i-mon-conseiller-crypto.fr futhi abaphathi bayo abanakubekwa icala ngokulahleka okungaba khona.
Funda wethu Imibandela Yokusebenza neyethu Umthetho wokubonisa izinto ngale.